मुख्य – Page3– Banking Khabar
यी हुन्, साताभरका टप बैंकिङ खबरहरु
घर अब सरल कर्जामा : कुन बैंकको कस्तो सुविधा ?
बैंकिङ खबर / बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको व्याजदर आ–आफ्नै छ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्याजदर एउटै छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा ग्राहकको आकर्षण ल्याउन आ–आफ्नै स्किमहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् । भर्खरै मात्र एनएमबी बैंकले ३५ बर्षे …
एक दर्जन बैंकको मुनाफामा गिरावट, मेगा बैंकको प्रदर्शन दयनीय
बैंकिङ खबर । २८ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा १२ वटा बैंकको नाफा घटेको छ । मेगा बैंक, कुमारी बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, सनराइज बैंक, सिद्धार्थ बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, प्रभु, सिटिजन्स बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, कृषि …
बैंकिङ ट्रेनिङ सम्पन्न, मेनेजमेन्ट विद्यार्थी लाभान्वित
बैंकिङ खबर । राजधानीमा आयोजित पाँच दिने बैंकिङ ट्रेनिङ विहीबार सम्पन्न भएको छ । कात्तिक २६ गतेदेखि संचालन भएको ट्रेनिङमा झन्डै ४० विद्यार्थीहरुको सहभागीता रहेको थियो । मिडिया इन्टरनेशनलद्धारा आयोजित उक्त बैंकिङ ट्रेनिङमा बैंकिङ क्षेत्रका विभिन्न विज्ञहरुद्धारा प्रशिक्षण दिइएको थियो …
बुटवल : नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले व्यापार घाटा कम गर्न स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोतसाधन परिचालन गरी उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन् । जडिबुटी, तरकारी अन्नको उत्पादनले आयात घटाउँदै व्यापार घाटा कम गर्ने भएकाले स्थानीय तहले त्यसतर्फ काम …
राष्ट्र बैंकले सुधार्यो एनसीसी बैंक, नाफा बढाएर १६ करोड पुर्यायो
बैंकिङ खबर । ३५ महिनासम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनमा रहेर फुकुवा भएको नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा नाफा बढेको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । विवरणअनुसार, एनसीसी बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा १६ …
सेञ्चुरी बैंकले नेपालमै पहिलो पटक सुरु गर्यो ‘मल्टि करेन्सी कार्ड’
बैंकिङ खबर । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले एक्सिस बैंक अफ इन्डियासँगको सहकार्यमा नेपालमा नै पहिलो पटक मल्टि करेन्सी कार्डको सुरुवात गरेको छ । साथमा इन्डो नेपाल इजि रेमिट र मोबाइल बैंकिङ एप्सको पनि शुरुवात गरेको छ । डेपुटी गभर्नर शिवराज …
वित्तीय चेतनामा सबैभन्दा अब्बल दुई देशहरु
बैंकिङ खबर । विश्वव्यापी रुपमा हेर्दा, वित्तीय साक्षरताको अवस्था १३ देखि ७१ प्रतिशतसम्म रहेको छ । सबैभन्दा कम जनसंख्या वित्तीय रुपमा साक्षर रहेको मुलुक यमन हो । यहाँका १३ प्रतिशत जनता मात्रै वित्तीय रुपमा साक्षर रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ …
जीवन बीमाले ल्यायो नयाँ तरंग
बैंकिङ खबर । जीवन बीमाले बीमा क्षेत्रमा नयाँ तरंग ल्याएको छ । बीमा कम्पनीको संख्यात्मक वृद्धिसँगै बीमा शिक्षा पनि बढ्न थालेको छ । यसअघि नौ वटा जीवन बीमा कम्पनी संचालनमा रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा सात वटा जीवन बीमा कम्पनी थपिएका …